Matangiro andakaita kukwirana naBamkuru murume wa Sisi – VanodaZvinhu
Matangiro andakaita kukwirana naBamkuru murume wa Sisi
by DrSviro · April 5, 2016
My name is Jocy and i recently moved to SA to stay with my sister and her husband. Accommodation is an issue for Zimbabweans in SA such that vaigara mu 1 bedroomed flat mune nekaSmall Kitchen, ini ndinorara pasi ivo pabed pavo. Sister wangu anoshanda kuSame basa nemurume wake but different shifts. Ini i am still looking for a job.
Because mashifts avo akasiyana i spend one week alone nesister yangu and the next week naBabamukuru. Nhau yakatanga sister wangu arikubasa she was finishing late, Bamkuru vakanditi, “Mainini how is the job hunting going” I told him how i had gone for 3 interviews but haven’t been called back. Bamkuru vakanditi, “ko haudi here kuita extra money wakamirira basa”, I asked him how but he just laughed ndokutanga havo kuona TV.
Mangwana sister wangu again was kubasa and Bamkuru came home ndikavapa food yavo, he switched on the TV and sat vachidya havo. Vakatora phone yavo ndokunditumira App message even though ndaive muSame room navo. Msg yaiti: “Bvisa Bra yako ugare usina bra for the next 30 minutes ndokupa R70”. Ndichiverenga message iyi ndakanzwa hasha nekutsamwa same time such that handina kupindura ndakaenda panze ndokugara ipapo.
Ndiripanze ndakatanga kufunga hangu and i convinced myself kuti kuona chete pasina kubata is not cheating. So i replied him ndikati “but no touching kuona chete”. I went back inside and into the bathroom ndikadzoka ndabvisa bra.. Dzakasekerera ndokucontinue hadzo neTV. Akanditambidza R70 akati yaive yekuti ndabvuma kubvisa bra. After about an hour he sent another message, “UKABVISA TOP YAKO NDOKUPA R150 IZVOZVI”. Ini ndakapindura nemuro ndikaramba ivo ndokuseka havo. I told him to delete the chats that he was sending me.
Manheru iwayo pakauya sister wangu kuma 2AM, ndanga ndarara asi ndakanzwa sister vangu vachichema nevoice riripamusoro ndakamuka pandakavhura maziso ndakaona Bamkuru vangu varibusy kusvira sister wangu nekumashure. My sister vairatidza kuti varikunakirwa heavy. Ndakaramba ndakatarisa and ndakanzwa nyere dzisingaite, ndakatanga kuzvibata pabeche rangu ranga rakatota zvaro. Pasina nguva ndanga ndatotunda, Bamkuru vaingosvira chete, zvanga zvisina tsitsi mukati vayita kunge a man possessed neDemon reSviro.
Kuseni kwacho ndakabuda ndikaenda kuInterview, Bamkuru dropped me off kumwe kunonzi kuKillarney Mall imo muJoni. I couldn’t not focus on anything ndaingoti ndikavhara maziso ndinoona ZIMBORO raBamkuru vangu richibvarura sister wangu nekumashure. Ndakapedza interview ndokupinda muTaxi ndokuenda kumba kwataigara kuRosettenville. Ndakapfura nemuJoni mutown ndokuenda munaJeppe Street ndokutenga kaMini Skirt kapfupi pfupi. Ndanga ndaita kazano kekuda kuuraya Bamkuru nenyere.
Sister wangu was home sleeping. Ndakasvika ndokutanga hangu kuona TV. Kuma 4PM sister wangu akabuda ndokuenda kubasa, pasina chinguva Bamkuru vakasvika ndokuwana ndakarara paBed pavo ndine BRA chete nekaMini Skirt Kaye. Ndakanyepedzera kuvhunduka ndokumhaya kupfeka hembe pavakapinda. Ndakabva pabed ndokugara pachair yaive mumba imomo. Bamkuru vakaita kunge ndisimo ndokutanga kubvisa hembe dzavo mumba imomo as he was changing. Ndakati “aah ko nhai Bamkuru mobvisa hembe ndirimo here?” vakaseka havo ndokuti “Ko ndapinda iwe usina kupfeka wani, so i am just returning the favour” “Plus mini skirt yako iyo irikuratidza zvese” he added. Ndakanzwa kunyara panguva iyoyo asi nyere dzanga dzakawanda kupfura nyadzi. NDakasimuka ndokenda kunovatorera food, ndaifamba ndichitambisa magaro angu. Pandakasvika ndichivatambidza plate yavo yakasverera ndokubata pagaro angu aibudikira mumini skirt. Ndakanyera kuvhunduka ndokuvati “remember no kubatana!”
Ndakaita chivindi ndikati ndipei R150 iya kana muchida kuona mazizamu angu! Vakangotora wallet yavo chinyararire ndokunditambidza R200 vakanditi R50 ndeyekuti vangobata 1 zamu chete nekurikisser for 30 seconds. Ndakabvuma ndokubvisa bra neTop ndokugara ndakavatarisa ivo vachidya. Murume mukuru akaita kunge achadzipwa nesadza akatarisa. Vakapedza kudya and pasina warning ndokuuya ndokunditakura ndokundirarisa paBed. Vakatanga kubata zamu rangu vachikisser rimwe racho. 30 seconds dzakapfura ndokubva ndasimuka ndikati zvakwana. Ndakaona murume achitora wallet yake zvakare ndokuburitsa R500 ndokundipa vachiti… “for this bvisa hembe dzako dzese undisiye ndiite zvandinoda”
Ndakaitambira ndichidedera ndokusimuka ndokubvisa hembe dzangu dzese, imwe pfunga told me that what i was doing was very wrong but NYERE nekuda MBOR took over. Ndakarara paBed Bamkuru ndokutanga kundikisser muviri wese. Vakanditi ndirare neDumbu ndakavhura makumbo ini ndokubvuma. Pasina nguva ndakanzwa Bamkuru vachindikisser magaro angu and in seconds MBORO yavo yanga yakupinda mandiri nekumashure. Baba vane zihombe ivavo… Vakandisimudza pamagaro pangu apa ndokutanga kunyatsondisvira heavy. At that moment ndakanzwisisa kuti sei sister wangu aichema zuro manheru. Bamkuru vakandisvirira non stop i think for more than 1 hour. Ndakatunda hameno how many times. Vakazoti ivo vakuda kutunda, ndakaita vekukumbira kuti vasatundira mukati.
Vapedza handizive kuti chii chakaitika, ndakazomuka kuma10 PM, Bamkuru vanga vandirarisa pasi pandinorara vandipfekedza night dress rangu.
by DrSviro · Published October 29, 2015
by DrSviro · Published July 25, 2015
HuTemporary Teacher kwaMutare,dhuma dhuma nebeche remwana wechikoro
by DrSviro · Published April 19, 2014
Next story Confessions of a crossborder: Ndakarohwa nyoro na driver neumwe wake mugonyeti!
Previous story Kukwapaidza kwandakaita Officer (ZRP) nayo Nyoro!